Maxay yihiin qalabka loo isticmaali karo in lagu sameeyo cilmi-baarista erayga Amazon?
cilmi-baarista muhiimka ah waa marxalad muhiim ah oo ku saabsan ololeynta xawaarida Amazon aad raadineyso. Helitaanka saxda ah ee keywords raadinta aad Amazon aad kor u qaadi kartaa dakhligaaga iyo hagaajin alaabtaada darajo.
Waxaa laga yaabaa in aad aragtay koobab wax soo saarka ah oo aad u fiican oo ay ku jiraan macluumaad badan oo aan muhiim ahayn oo la isku daro Amazon. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u baahan nahay inaan qirno in alaabooyinkan ay leeyihiin darajo sare oo ku saabsan bogga natiijada raadinta ee Amazon. Waxaad la yaabi kartaa sababta ay isticmaalayaashu u riixayaan shaashado dheeraadka ah ee spammy sida oo ay u iibsadaan alaabadaas. Dhab ahaantii, dadka isticmaala dabeecada uma jecla noocyadaas, laakiin Amazon algorithm waxay u arkaan inay ku habboon yihiin oo sharxi karaan. Taasi waa sababta aad ula kulmi karto koobab noocan oo kale ah TOP ee bogga natiijada raadinta ee Amazon. Ganacsatada internetka ee isticmaala buustooyinka dheeraadka ah waxay yaqaanaan sida Amazon A9 algorithm u shaqeyso. Si loogu magacaabo mansabyo si fiican loo xulanayo ganacsatada internetka waxay sameeyaan baaritaanno muhiim ah oo lagu ogaanayo ereyada raadinta dhabta ah ee ay doonayaan inay bartilmaameedsadaan. Iyadoo qalab cilmi-baaris oo muhiim ah oo Amazon ah, waxay go'aamiyaan mugga raadinta keywords keywords oo ku daraya kala duwanaansho ku habboon ee Title Title, Qeexida, Points calaamadaha, Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo, Feedback, xitaa images.
Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa qalabka aad isticmaali karto si aad u hesho shuruudaha raadinta ugu haboon ee alaabtaada, iyo sida ay kuu caawin karto inaad kor ugu qaado darajooyinkaada iyo iibka. Sidaa daraadeed nala soo dhowow in aan eegno qalabka xirfadleyda iyo istaraatijiyado wax ku ool ah si aan u helno ereyada muhiimka ah ee ganacsigaaga internetka. Qorshaha Keydka Google
Qorshaha Gundhigga Google ee muhiimka ah waa qalab cilmi-baaris oo muhiim ah taas oo ah
ayaa loo heli karaa daawadayaasha ballaadhan. Waa bilaash iyo user-saaxiibtinimo. Waxaa intaa dheer, waxay bixisaa xogta ugu saxsan. Qalabkani wuxuu kaa caawin karaa inaad ku qiyaasto mugga raadinta ereyada muhiimka ah iyo erayada muhiimka ah. Intaas waxaa dheer, waxay ku siinaysaa fursad aad ku hesho jumlado kale oo la xiriira. Daqiiqad kasta Google ayaa ururisa macluumaadka gawaarida, taasina waa sababta Qorshaha Guud ee Keydka Google waa halka aad ka heli karto tirooyin quman oo ah inta baadhitaan ee ereyga muhiimka ah ama weedhaha la helo. Waxaad ku dhejin kartaa raadintaada juqraafi iyo astaamaha dhagaystayaasha (da'da, jinsiga, iwm. ). Waxay si gaar ah waxtar u leedahay haddii aad jeclaan lahayd inaad kor u qaaddo alaabtaada Amazon ama goobaha kale ee ganacsiga.
Si aad u bilowdo isticmaalka Qorshaha Keydka Google, waxaad u baahan tahay inaad abuurto akoon bilaash ah oo AdWords ah. Markaad haysato koontadaada, waxaad ka heli doontaa Qorshaha Ku-Meel-Gaarka ah ee hoos yimaada qalabka tabta. Halkan waxaad ku bilaabi kartaa raadintaada ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u eegto shuruudaha raadinta dheeraadka ah ee dadka isticmaala ay raadinayaan. Si aad u fuliso hawshan, waxaad u baahan tahay inaad furto "Raadi ereyo cusub oo aad hesho helitaanka xogta raadinta" qaybtaada ku dheji "Ereyo ama adeeg". Ugu dambeyntii, guji "Raadi fikrado" badhan. Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa liis ah ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad raadiso fikradaha muhiimka ah, ma aha fikrado kooxeed.
Qorshaha Keyword Key Google wuxuu ku siin doonaa raadinta celceliska bisha ee keywords keywords. Cabbirka raadinta dhabta ah ee Amazon wuxuu ka duwanaan karaa xogta aad ka heli doonto GKP. Si kastaba ha ahaatee, xogahan waxay noqon doonaan kuwo isku mid ah, kuwaas oo kaa caawin doona inaad go'aamiso ereyada muhiimka ah ee ku siin doona gaadiidka ugu badan ee Amazon.
Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan qalabka cilmi-baarista ee Amazon ee aad ka heli karto Su'aalaha iyo Jawaabaha Su'aalaha iyo Jawaabaha Source .